४ माघ विर्तामोड । झापाका भन्सार राजस्व प्रभावित हुन थालेको छ । भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रने क्रम बढेपछि राजस्व संकलनमा कमी आउन थालेको हो । कात्तिक महिनादेखि भद्रपुरस्थित भन्सार कार्यालयले...
४ माघ काठमाडौ । सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेश गरेका उच्च अदालतका पाँच न्यायाधिश प्रारम्भिक कारबाही मा परेका छन् । उच्च अदालत विराटनगरका ती न्यायाधिशलाई न्यायपरिषद्ले काठमाडौ तानेको छ...
४ माघ काठमाडौ । सरकारले प्रहरी नायब निरीक्षक सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्ने भएको छ । इन्स्पेक्टर तथा त्योभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरीको दरबन्दी तत्कालका लागि केन्द्रमै राखेर मेन्द्रले...
४ माघ विर्तामोड । झापाका भन्सार राजस्व प्रभावित हुन थालेको छ । भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रने क्रम बढेपछि राजस्व संकलनमा...
४ माघ, इलाम । इलाममा नौं दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि उनलाई उपचारको लागि काठमाडौँ लगिने तयारी...
४ माघ, इलाम । इलाममा नौं दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको...
४ माघ विर्तामोड । झापाका भन्सार राजस्व प्रभावित हुन थालेको...
४ माघ काठमाडौ । सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेश...
४ माघ काठमाडौ । सरकारले प्रहरी नायब निरीक्षक सइसम्मका प्रहरीलाई...
४ माघ काठमाडौ । सरकारले पानी जहाज चलाउन कार्यालय स्थापना...
४ माघ काठमाडौ । सरकारले पानी जहाज चलाउन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले १६ जना कर्मचारी रहने गरी पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो...